UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka SYL iyo tirada dhimashada | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka SYL iyo tirada dhimashada
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hoteelka SYL iyo tirada dhimashada
Muqdisho (Halqaran.com) – Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa Caawa weerar ku qaaday Hoteelka SYL oo ku dhow Madaxtooyadda Soomaaliya.
Weerarka ayaa ku bilowday Bambaanooyin ay dagaalyahanadda ka tirsan Al-Shabaab ay ku weerareen Ilaaladda Hoteelka waxaana kadib u suurta gashay in ay gudaha u Galaan.
Sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Gaashaanle Dhexe Cabdiraxmana Cumar Jeeniqaar oo taliye u ahaan jiray Danab, Maleeshiyaadka ayaa markii gudaha u soo galeyn Hoteelka waxa ay rasaas ku fureen dadkii fadhiyay barxadda hoteelka,waxayna iska caabin ay ka kulmeen ciidamo gudaha ugu jirey Hoteelka.
Dadkii ku sugnaa Hoteelka ayaa bilaabay in ay kala cararaan, waxaana la sheegay in rasaastii socotay ay khasaare dhalisay.
Weerarkaan waxa ku dhintay mid kamid ah Garsoorayaasha Maxkamadda Gobolka Banadir oo lagu magacaabi jirey Cabdiqaadir Cumar Cabdi, shaqsiyaad kale oo Hoteelka arrimo ugu sugnaa.
Waxaa ku dhaawacmay labo Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxana lasoo badbaadiyay dad ku dhow 50-ruux oo ku sugnaa Gudaha Hoteelka Syl.
Dhanka kale, Hay’adaha ammaanka ayaa sheegay in la toogtay labo kamid ah Maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday hoteelka,seddex kalana ay wali dagaalamayaan howlgalkana uu socdo.
Xafiiska Wararka Halqarna.com
garsoorayaal ku dhintay
u dhow madaxtooyada Soomaaliya
Weerarka caawa ee Hoteelka SYL